Boostada loogu talagalay dadka jecel daabacaadda daabacaadda | Abuurista khadka tooska ah
Un post ee warqad jecel classic raadinaya inuu boos ka helo da'da dhijitaalka ah iyo baabi'inta farsamooyin kale oo daabacaad ah ayaa soo maray. Daabacaadda waraaqaha ayaa wali aad ugu nool Tenerife (Santa Cruz, Canary Islands) oo ay ugu mahadcelinayaan dadaalka iyo shaqada qaar ka mid ah nashqadeeyayaasha u dagaallamaya sidii ay u badbaadin lahaayeen farsamadan daabacaadda oo taariikh badan leh.
Maalmo ka hor ayaa Kulankii 4aad ee daabacayaasha waraaqaha aaway la kulmay qoraal ahaan iyo naqshadeeyayaasha naqshadeynta iyada oo ujeedadu tahay wadaagista, muujinta iyo keenista iftiinka buuxda ee farsamadan daabacaadda. Tijaabinta noocyada jireed waa mid khibrad gaar ah lama dareemi karo haddii aan kaliya isticmaalno kombiyuutarka. Waxaan ku dhiiri galinayaa dhamaan nashqadeeyayaasha / farshaxan yahanada in hadii aad waligaa fursad u hesho inaad la shaqeyso noocyada ha ka waaban inaad sidaas sameyso.
Si uusan u adkayn warqadda cadaadisku waxay leedahay taariikh (taariikh badan) laga bilaabo sicirka go'an ee ugu horeeya ilaa mobilada Gutenberg. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikh guud oo ku saabsan gujintan aquí.
Munaasabada waxaan awoodnay inaan indhaheena ku aragno natiijada a aqoon isweydaarsi qoraal ah oo u dhexeeya dadka jecel farshaxanimadan qoraalka ah. Laga soo bilaabo boodhadhka ilaa kaararka kirismaska, bandhig yar muujiyey shaqo aad u nadiif ah oo la hubo taabasho tijaabo ah
Waxaan arki karnaa a muunad yar oo ka mid ah shaqada soo ifbaxay dhacdada qoraalka.
Sida aan ku arki karno sawirka, way noqon karaan isku dar midabyo iyo noocyo kala duwan awood u lahaanshaha xitaa adeegsiga sawirada iyo dhamaan noocyada walxaha jirka ee lagu shaabadeyn karo warqadda. Waa inaanan ilaawin inay tahay a nidaamka daabacaadda cadaadiska ku saleysan taas oo layli ah daabacaadda dusha sare, hal-abuurnimo iyo tijaabooyin waa wax ay tahay inaan sameyno Daaro awoodda buuxda ee farsamadan.
Laba naqshadeeye ayaa mas'uul ka ah Tenerife ee soo ceshano dhammaan wixii qoraal ahaan ah inay ku dhowdahay in la tuuro si ay adeeg cusub u siiso oo yaan la ilaawin. Matthias beck Wuxuu ku dhammeeyay naqshaddiisa garaafka iyo tababbarka qorista ee magaalada Berlin. Wuxuu degan yahay Jasiiradaha Canary ilaa 2007, wuxuu aasaasay istuudiyaha naqshadeynta Rosebud sanadkii 2008. Lars Petter Amundsen Wuxuu ku bartay naqshadeynta garaafka iyo teeb-gareynta ee Central Saint Martin's College of Art & Design in London. Tan iyo 2003 wuxuu ku nool yahay Tenerife.
Halkan waxaan ku arki karnaa sawir ah jilayaasha ugu waaweyn ee qoraalka: Guys khadkooda bixin aqoon isweydaarsiyo halkaas oo aad ku tijaabin karto nooca guur guura ee hela talobixinta aqoonyahannada qaybta.
Waxaan aragnay daabacaadda qaab-qoraalka ee maalinteenna maanta maxaa yeelay waa wax aad loo adeegsado: laga bilaabo dhinto in gooyaa qaabab gaar ah ilaa nasasho (sare ama hoose) oo maamusha in lagu daro taabashadaas ka duwan naqshadeena. Waa nidaam fiican oo keena nostalgia waqtiga isticmaalka dhammaan kuwa jecel naqshadaha.
Un mashruuc aad u xiiso badane (ma uusan joogin carwada) waa tan BLOCD daraasad yaa abuuray qaar niman guur guura oo aad u macaan. Hadaad rabto inaad waxbadan ogaato waad aqrin kartaa boostada asalka ah.
Qaybta xiisaha leh ee dhacdadaas ayaa ahayd awoodda ogaada magacyada qaar ka mid ah istuudiyaha hormoodka ah ee naqshadeynta la shaqeeya adduunka qoraalka.
Waan yara tagayaa liistada taas oo loo soo bandhigay martida:
Xafiiska Marvel Typographic Office
Liiskan yar ayaan ku qaban karnaa cajaa'ib ku samee dunidan qoraalka waxoogaa ah oo arag waxa ay noogu deeqi karaan mashaariicdeena mustaqbalka.
Farsamooyinka qaarkood muddo dheer waxay maareeyaan inay ka gudbaan waqtiga oo aad gasho tiknoolajiyada cusub, si aad uga dhex muuqato. Waa inaan u aragnaa farsamooyinkan inaysan ahayn wax qadiim ah oo aan qiimo lahayn laakiin a suurtagalnimada in la abuuro wax ka duwan, iyo xitaa intaa ka sii badan haddii aan ku darno tikniyoolajiyad cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Boostada loogu talagalay dadka jecel daabacaadda warqadda